2009 – Year – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Vampire Diaries (2009) Season3Unicode Vampire ဇတ်လမ်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေကတော့ Vampire Diaries ဆိုတာ မကြည့်ဖူးရင်သာနေမယ် နာမည် မကြားဖူးဘူးဆိုတဲ့သူတော့ ရှိမယ်မထင်ဖူးနော် .. ဟုတ်ပါတယ် Vampire ဇတ်လမ်းတွေထဲမှာတော့ တော်တော်လေးအောင်မြင်တဲ့ ဇတ်ကားပါ Vampire Diaries က Season 8 မှာဇတ်သိမ်းသွားပါပြီ။ နောက်ဆက်တွဲလဲ ထပ်မထွက်လာတော့ပါဘူး .. The Originals TV Series ဟာ ဒီ Vampire Diaries Series ကို အခြေခံပြီးထွက်လာတဲ့ CW ရဲ့ နောက်ထပ် Vampire Series တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် .. ဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ Elena Gibert(Nina Dobrev) ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေးဟာ မိဘနှစ်ပါး ကားအက်စီးဒင့်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့တာကြောင့် တစ်ကောင်ကြွက်ဘဝနဲ့ ဗာဂျီးနီးယားမြို့လေးမှာနေထိုင်ပါတယ် .. သူမမှာ Stefan Salvatore (Paul Wesley) ဆိုတဲ့ ချစ်ရတဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိပါတယ် သူ့ချစ်သူဟာ အသက် 162 နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Vampire တစ်ကောင်ဆိုတာ သူမ မသိခဲ့ပါဖူး ...
TMDb: 8.3/10 6042 votes
The Vampire Diaries Season2Complete Unicode Vampire ဇတ်လမ်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေကတော့ Vampire Diaries ဆိုတာ မကြည့်ဖူးရင်သာနေမယ် နာမည် မကြားဖူးဘူးဆိုတဲ့သူတော့ ရှိမယ်မထင်ဖူးနော် .. ဟုတ်ပါတယ် Vampire ဇတ်လမ်းတွေထဲမှာတော့ တော်တော်လေးအောင်မြင်တဲ့ ဇတ်ကားပါ Vampire Diaries က Season 8 မှာဇတ်သိမ်းသွားပါပြီ။ နောက်ဆက်တွဲလဲ ထပ်မထွက်လာတော့ပါဘူး .. The Originals TV Series ဟာ ဒီ Vampire Diaries Series ကို အခြေခံပြီးထွက်လာတဲ့ CW ရဲ့ နောက်ထပ် Vampire Series တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် .. ဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ Elena Gibert(Nina Dobrev) ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေးဟာ မိဘနှစ်ပါး ကားအက်စီးဒင့်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့တာကြောင့် တစ်ကောင်ကြွက်ဘဝနဲ့ ဗာဂျီးနီးယားမြို့လေးမှာနေထိုင်ပါတယ် .. သူမမှာ Stefan Salvatore (Paul Wesley) ဆိုတဲ့ ချစ်ရတဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိပါတယ် သူ့ချစ်သူဟာ အသက် 162 နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Vampire တစ်ကောင်ဆိုတာ သူမ မသိခဲ့ပါဖူး ...
TMDb: 8.3/10 4407 votes
The Vampire Diaries Season 1 Complete Unicode Vampire ဇတ်လမ်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေကတော့ Vampire Diaries ဆိုတာ မကြည့်ဖူးရင်သာနေမယ် နာမည် မကြားဖူးဘူးဆိုတဲ့သူတော့ ရှိမယ်မထင်ဖူးနော် .. ဟုတ်ပါတယ် Vampire ဇတ်လမ်းတွေထဲမှာတော့ တော်တော်လေးအောင်မြင်တဲ့ ဇတ်ကားပါ Vampire Diaries က Season 8 မှာဇတ်သိမ်းသွားပါပြီ။ နောက်ဆက်တွဲလဲ ထပ်မထွက်လာတော့ပါဘူး .. The Originals TV Series ဟာ ဒီ Vampire Diaries Series ကို အခြေခံပြီးထွက်လာတဲ့ CW ရဲ့ နောက်ထပ် Vampire Series တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် .. ဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ Elena Gibert(Nina Dobrev) ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေးဟာ မိဘနှစ်ပါး ကားအက်စီးဒင့်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့တာကြောင့် တစ်ကောင်ကြွက်ဘဝနဲ့ ဗာဂျီးနီးယားမြို့လေးမှာနေထိုင်ပါတယ် .. သူမမှာ Stefan Salvatore (Paul Wesley) ဆိုတဲ့ ချစ်ရတဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိပါတယ် သူ့ချစ်သူဟာ အသက် 162 နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Vampire တစ်ကောင်ဆိုတာ သူမ မသိခဲ့ပါဖူး ...
TMDb: 8.2/10 3297 votes
The Vampire Diaries Season 1 Complete